Medical Writings ဆေးပညာစာများ: HIV and CD4 and Viral load စီ-ဒီ-ဖိုး နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အရောအတွက်
HIV and CD4 and Viral load စီ-ဒီ-ဖိုး နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အရောအတွက်
Sep 7, 2010 at 12:27 AM
Q 1: I amaseaman since 1989. I got HIV virus. In July 2010 I checked cd4 count and the result was 360. Please advice me. Do i need to take medicine and what medicine can I get? And cost of medicine? Now my health condition is good and I am working on board.
8 Oct 10, 15:16
Q 2: I want to know about ART and what is the situation in cd4 a/c and viral load. Now one of my friends has 1034 cd4 a/c and viral load 786. Please explain me how about her situation.
HIV/AIDS ရောဂါအကြောင်း ကောင်း-ဆိုး သိချင်ရင် စမ်းသပ်တဲ့ နည်းတခုကို CD4 (Cluster of differentiation 4) လို့ ခေါ်တယ်။ အလွယ်ခေါ် T4 count; T-helper cells; T-suppressor cells; Cytotoxic T-cells နဲ့ တရားဝင် အခေါ်က CD4 lymphocyte count; CD8 lymphocyte count; CD4/CD8 ratio; CD4 percent ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ (ဆဲလ်) တွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အဲဒီဟာတွေထဲက Lymphocyte ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတမျိုး ဖြစ်တယ်။ HIV ပိုးဝင်လာရင် T-cells ကို တိုက်ခိုက်တယ်။ CD4 က T cells ထဲကို HIV-1 ဝင်လာစေဘို့ “ဧည့်ကြို” တာဝန်ယူသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ (ဆဲလ်) တွေကို အသုံးချပြီး၊ ပုံတူပွါးတာမို့ ခုခံအားစနစ်ကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ (ဆဲလ်) တွေ နည်းနေတာဟာ ခုခံစွမ်းအားတွေ ကျဆင်းတယ်လို့ သွယ်ဝှိုက်ပြီး ပြောတယ်။
ရောဂါ ဖြစ်စပိုင်းမှာတော့ လူဟာ ပျက်စီး-ပြောင်းသွားတဲ့ CD4 cells ကို အစားထိုး ပေးနိုင်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကြ ဒီလို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ CD4 cells တွေ နည်းလာလေလေ ခုခံအား ကျဆင်းလေဘဲ။ နောက်ဆုံးမတော့ ဘာဆို ဘာမှ မခုခံနိုင်တော့ပါ။
CD4 counts 500 -1500/mm3 အတွင်းရှိတယ်။ ပုံမှန်အရေအတွက်က ဓါတ်ခွဲခမ်း တခုနှင့်တခု မတူပါ။ 500-1200x106/L လို့ သတ်မှတ်တာလဲ ရှိတယ်။ CD4 Count 200 cells/mm3 ရှိတာတွေ့ရင် AIDS ရောဂါသည်လို့ ပြောတယ်။ ART ဆေး ပေးတယ်။ တချို့ ဆေးရုံတွေက 350 cells/mm3 ရှိကတည်းက ရောဂါလက္ခဏာ ရှိရှိ- မရှိရှိ ဆေးပေးတယ်။ CD4 နည်းပေမဲ့ ကျန်းမာနေသူလဲ ရှိတယ်။ မနည်းပေမဲ့ နေမကောင်း ဖြစ်နေသူလဲ ရှိပြန်တယ်။
HIV viral load test ခေါ်တဲ့ သွေးထဲမှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ သိတဲ့ စမ်းသပ်မှုနဲ့ပါ တွဲမှ ရောဂါ ဆိုးလာတာ၊ ဆေးထိရောက်တာ ပိုသေခြာတယ်။ HIV မဟုတ်တဲ့ တခြား ရောဂါ-အခြေအနေတွေမှာလည်း ဒီနည်း သုံးပါသေးတယ်။
CD4 ဟာ HIV ပိုးက ဘယ်လောက် ဖျက်ဆီးထားပြီလဲ ဆိုတာကို သိစေနိုင်ပြီး၊ Viral load ကတော့ သွေးထဲမှာ HIV ပိုး ဘယ်လောက် များများ ရှိနေသလဲကို သိစေတယ်။ Viral load များနေတာ မကောင်းဘူး။ 100,000 ကျော်ဆိုရင် ဆေးကုပါလို့ ဆိုတယ်။